That's so good, right?: Blackmail
ကျွန်တော်က အိမ်စီးကားအမျိုးမျိုးကို တင်သွင်းပြီး ပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သော အရောင်း အ၀ယ်ကိစ္စဆိုတော့ အလုပ်ကို အေးအေးဆေးဆေးကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဖောက်သည်တွေကို ကျွန်တော် ကိုင်တွယ်ပုံအား သူဋ္ဌေးက တကယ်သဘောကျတာပါ။ ကျွန်တော် ကုမ္ပဏီအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာ ၅နှစ်ပြည့်လို့ ၆နှစ်ထဲရောက်လာပါပြီ။ အလုပ်ကောင်း ကောင်းလုပ်တော့ ရတဲ့အလုပ်လစာက သုံးစွဲဖို့ ဖူလုံပါတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရုံးတွင်းပါတီပွဲနှစ်စဉ် ဆင်နွှဲကြ ကျင်းပဖြစ်ကြပါတယ်။ မိသားစုဝင်တစ်ဦး၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ချစ်သူကိုလည်း ခေါ်လာခွင့် ပေးတဲ့ သူဋ္ဌေး သဘောထားကြီးမှုရှိပါတယ်။ အစားအသောက်မျိုးစုံနှင့် ဆင်နွှဲနိုင်တာပေါ့ အတော်ကောင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင် တစ်ခု ခုမှာ။
တစ်ခုသော အချိန်အခါမှာတော့ အလုပ်ကအပြန်နောက်ကျဖို့အကြောင်းက ဖန်လာပါတယ်။ ကားတွေ အ၀ယ်လိုက်တဲ့ ရာသီဖြစ်ပြီး ညမိုးချုပ်သွားတာကြောင့်ပါ။ သူဋ္ဌေးရဲ့ သမီး နှင်းဆီကအိမ်ပြန်ချင်နေပြီ။ သူဋ္ဌေးနှင့် သူ့ဇနီးကတော့ အလုပ်လက်စသပ်ဖို့ကျန်နေခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော်နည်းနည်းပင်ပန်းနေပေမဲ့ နှင်းဆီကို အိမ်လိုက်ပို့ဖို့ အလိုက်သိရတာပေါ့လေ။ နှင်းဆီ ကျွန်တော့်အပေါ် တခြား အစီအစဉ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ နည်းနည်းရိပ်မိပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရာလမ်းမှာ နှင်းဆီ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှီတွယ်လာရင်း သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းအနှံ့ပွတ်သပ်။ အိုး...ကျွန်တော်က ဘာသားနှင့်ထုထားတာမို့လဲ? ယောက်ျားထဲကယောက်ျားဆို တော့ နှင်းဆီရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကို သူမရဲ့ အိပ်ယာထဲမှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြင်းပြတက်မက်စွာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းပေါ့။
နှစ်လမြောက်သောအချိန်မှာ နှင်းဆီရဲ့ဖုန်းကို ကျွန်တော်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ၊ သူမနှင့်အိပ်ခဲ့တာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ ကလေးက ကျွန်တော်ကလေးဆိုတာ သိနေခဲ့ခြင်းပါ။ အဲဒီအကြောင်းကို နှင်းဆီက သူ့အ၀န်းအ၀ိုင်းကို မပြောချင်ပေမဲ့ ကလေးကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ချင်ခဲ့ပါ၏။ ကလေးငယ်နာမည်ဆိုးတစ်ခု ရင်မဆိုင်ရစေဖို့ သူမကို ကျွန်တော်လက်ထပ်ခွင့်ပေး မလားမေးတော့ လက်ထပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလို့ သူထင်သတဲ့။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော့်ကို မချစ်လို့ပါဆိုပဲ။ ဘယ်လိုသဘောထားရှိတဲ့ မိန်းကလေးပါလိမ့်။ ကလေးနှင်ပတ်သက်တဲ့ စရိတ်စကအတွက် ကျွန်တော် အကူအညီပေးပါရစေဆိုတော့လည်း မလိုချင်ပါဘူးဆိုပြန် တယ်။ ကလေးရဲ့ အဖေက ဘယ်သူဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မသိစေချင်ဘူးတဲ့။ သူမရဲ့ မိဘတွေကိုရောပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်အလုပ်အကိုင် လက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါဝင်နေတာကြောင့်ဖြစ်မှာပါ။
လတွေကျော်ဖြတ်လာတော့ နှင်းဆီ ချစ်စရာကလေးငယ်တစ်ယောက် မွေးဖွားသန့်စင်ခဲ့ပါတယ်။ သမီးငယ်လေးပေါ့။ ရုံးတွင်းမှာ ရင်းနှီး တဲ့ ၀န်ထမ်းအတော်များများနှင့် ပါတီအသေးစားလေး လုပ်ဖြစ်ကြတယ်။ ကလေးအ၀တ်အထည်လေးတွေ၊ သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းလေး တွေကို လက်ဆောင်အစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ ယူဆောင်ကာ ကျွန်တော်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကလေးဆိုတာကို သိ ပေမဲ့ အသည်းမာတဲ့အေးစက်တဲ့ ပုံဟန်ဆောင်တာ နှင်းဆီရဲ့ သဘောဆန္ဒပြည့်မှာပါ။ သူနှင့်ကျွန်တော် အဆက်အသွယ်လုံးဝမပြုလုပ်ခဲ့။ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ တစ်ခြားသူမမြင်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်ရင်တွင်းမှာတော့ မျက်ရည်တွေတွေကျနေ မိပါတယ်။
လအနည်းငယ်အကြာမှာ ကျွန်တော် နှင်းဆီကို ဆက်သွယ်ဖို့လုပ်သင့်တယ်လို့တွေးထင်မိတယ် သူမကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် ကလေး အတွက် တစ်ခုခုများလိုအပ်နေသလားလို့။ ကျွန်တော်ဟာ ဖခင်တစ်ယောက်အနေနှင့် ဆွေးနွေးသင့်တာကို နှစ်ဦးသားဆွေးနွေးတိုင်ပင် ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်သမီးလေးအတွက် ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုချစ်ခင်မှုတာဝန် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျေမယ်လို့ ခံစား ရမှာပါပဲ။ နှစ်ဦးသား စကားတွေပြောနေချိန်မှာ လိုင်းခွဲဖုန်းတစ်ခုကနေတစ်ဆင့် ညီဇော်ဆိုတဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က အစအဆုံး နား ထောင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တကယ်မသိခဲ့ပါဘူး။ သူ ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာစုံကို ကျွန်တော်နှင့် confirm လာလုပ်ချိန်မှာ ကျွန်တော် အကြီးအကျယ်ဖျားသွားပါတယ်။ သူတောင်းဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ကျွန်တော်မလျှောက်ရင် သူဋ္ဌေးကို သားသမီးခြင်း ကိုယ်ချင်းစာ တဲ့အနေနဲ့ ပြောပြရမှာပဲတဲ့လေ။ ကျွန်တော်ယုံတောင်မယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး blackmail လုပ်ခြင်းခံနေရတဲ့လူအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိနေရတာ။ သူ ဘာ လိုအပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တကယ်မတွေးတတ်ဘူး။ မကြာခင်မှာတော့ သူ့စိတ်ထဲ ဘာရှိနေတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် straight ဆိုတာသူသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ စနေနေ့ည ၈း၀၀နာရီ သူ့တိုက်ခန်းမှာတွေ့မယ်လို့ ချိန်းဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်သိတယ် သူ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဘယ်တစ်ခုကိုများ ရွေးချယ်ခွင့်ရမလဲနော်။ ကျွန်တော် သဘောတူလိုက်ပါ တယ်။ စနေနေ့ညအရောက်မှာတော့ သူပြောတဲ့လိပ်စာအတိုင်း ကျွန်တော်ရောက်သွားကာ အခန်းတံခါးကို ခေါက်ဖို့ လက်တွန့်မိပါ သေးရဲ့။ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပေးပြီး ဆိုဖာမှာ ၀င်ထိုင်ဖို့ သူပြောတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်လိုက်နာပါတယ်။ ကျွန်တော်နှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင်က ဆိုဖာမှာဝင်ထိုင်ရင်း အမြဲတစေ သတိပြုမိနေတဲ့ သူ့ဆန္ဒတွေကို မီးထတောက်နေစေတဲ့ ကျွန်တော့်အကြောင်းကို သူပြောပါ၏။ ကျွန်တော်ဟာ အလွန့်ကို sexy ဖြစ်တယ်၊ သူ့စိတ်ကူးထဲမှာ ကျွန်တော်နှင့် အမြဲလိုလို ချစ်ပွဲဝင်တယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့ တယ်တဲ့လေ။ 'ကျွန်တော့်ကို ခင်ဗျားလိုအင်ဆန္ဒအတွက် အသုံးချတာတော့မမှန်ဘူးထင်ပါတယ်' လို့ပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ကျောက်နံရံနှစ်ခု ကြားက လမ်းကျဉ်းကျဉ်းမှာ ပိတ်မိနေသူဖြစ်ပြီး သူ့ဆန္ဒကိုသာ မလိုက်လျောခဲ့ရင် သူဋ္ဌေးရုံးခန်းထဲ တန်းဝင်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြီးတော့ နှင်းဆီရဲ့ကလေးအဖေဟာ ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောလိုက်ရုံပါတဲ့။ ကျွန်တော် ဆိုဖာပေါ်မှာ လှုပ်ရှားမှုမရှိ၊ တုန့်ပြန်မှုမရှိ ခဏတာ ငြိမ်သက်နေပြီးနောက်မှာတော့ ညီဇော့်ကိုပြောလိုက်ပါတယ် သူ့ဆန္ဒကို တစ်ခါတော့ လိုက်လျောပါ့မယ်လို့။ ကျွန်တော် တခြား ဘာများလုပ်နိုင်ဦးမှာလဲ ကျွန်တော့်အလုပ်အကိုင်က ကျွန်တော့် အသက်ရှင်သန်မှုမှာ အရေးပါတယ်မဟုတ်လား။
ညီဇော်က ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ် သူနှင့်အတူနေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စာကြည့်ခန်းထဲမှာ ရှိနေတာရယ်၊ မမေ့စရာကောင်းမဲ့ ဒီ ညနေခင်းအတွက် ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုကြောင်းဆိုတာရယ်။ သူက အဲဒီလူကို 'မင်းမင်း.....ငါ့ကောင် လာလေကွာ' အော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
အခန်းတစ်ခုရဲ့ တံခါးရွက်တစ်ခုပွင့်လာကာ လူထွားကြီးတစ်ယောက် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဘီလူကြီး တစ်ကောင်လို့ ထင်မြင်မိပါရဲ့။ သူအနည်းဆုံး ၆ပေ ၄လက်မ အရမ်မြင့်မယ်။ အလေးမ အားကစားသမားခန္ဓာကိုယ်နဲ့။ သူ ကျွန်တော့်ဆိုဖာဆီလှမ်းပြီး လက်ကမ်းပေး တာကြောင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရပါတယ်။ 'ခင်ဗျားကို တွေ့ရတာရယ်၊ ဒီအစီအစဥင်္လုပ်ဖြစ်တာရယ်ကို တော်တော်ဝမ်းသာပါတယ်' သူတို့ ဘာတွေပြောနေမှန်း ကျွန်တော် အသေအချာမသိသေးပါဘူး။
ညီဇော်က တစ်ခုခုသောက်ဦးမလားမေးတယ်။ ဘာအဓိပ္ပာယ်ပါလိမ့်? လူမှုဆက်ဆံရေးတစ်ခုသက်သက်....။ ကျွန်တော် ဘာမှမသောက် ချင်ပါဆိုတော့ သူက သက်သောင့်သက်သာနေစမ်းပါတဲ့။ 'အိုကေလေ.... Scotch နှင့် ရေသန့်တစ်ခွက်လောက်' လို့တောင်းဆိုလိုက် တော့ မီးဖို ချောင်ဘက် ထွက်ခွာသွားတယ်။ မင်းမင်းက ကျွန်တော့်နားလာထိုင်ပြီးနောက် သူ့မျက်လုံးများက ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို အကြည့် လွှမ်းတော့တာ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ တစ်ခုခုမှားနေသလို ခံစားရပါတယ်။ သူက အကြည့်စူးစူးတွေ ကျွန်တော့်ဆီလွှတ်ရင်း သူ့ နှုတ်ခမ်း တွေကို လျှာဖြင့် သရပ်ပုံက အရသာရှိလှတဲ့ ညစာစားပွဲဝိုင်းကို စားတော့ဝါးရတော့မယ့်အတိုင်းပါ။ ညီဇော် ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်နှင့် ပြန်ရောက် လာကာ တစ်ခွက်ကို ကျွန်ေတာ့်အား ကမ်းလိုက်ရင်း 'မော့သောက် ငါ့ကောင်'တဲ့။
ကျွန်တော် တစ်ငုံကိုစုပ်မျိုလိုက်တယ်။ အဲဒါ Scotch ချည်းပဲ ရေခဲတောင်မပါဘူး။ ညီဇော်က ကျွန်တော်အဲဒီအရာကို များများသောက် သင့်တယ် ဒါမှ အရာရာလုပ်ရကိုင်ရ လွယ်ကူလာမှာတဲ့ ပြောပြန်ရော။ သူ ဘာကိုဆိုလိုနေမှန်း ကျွန်တော်အခုထိမသိသေးပေမဲ့ မကြာခင် တော့ ရှာတွေ့မှာပါ။ ကျွန်တော် နှစ်ခွက်ကျော်ကျော် အကုန်မျိုချပြီးနောက်မှာတော့ ညီဇော် မတ်တပ် ထရပ်လိုက်ကာ အခန်းတစ်ခုကို ညွှန်ပြပါတယ်။ အဲဒီအခန်းကိုသွားကာ ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေ အားလုံး ခန္ဓာကိုယ်က ဖယ်ရှားလိုက်ပါဆိုပဲ။ ကျွန်တော် ထိုင်နေရာက ထ လိုက်ရင်း အခန်းတံခါးဝဆီ ဦးတည်လိုက်ပါတယ်။ သူနှင့် မင်းမင်းတို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခေါင်းခြင်းဆိုင်ကာ တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ တစ်ခုခုကိုပြောကြပါရော။ ကျွန်တော်အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့ တော်တော့်ကိုကြီးတဲ့ ခုတင်ကြီးကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အခန်းထဲကို ဖြည်းလေးစွာဝင် အ၀တ်တွေ အားလုံးချွတ်ကာ ကုလားထိုင်တစ်ခုပေါ်တင်ထားလိုက်တာပေါ့။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ အခန်း တံခါးပွင့်လာကာ ညီဇော်နှင့် မင်းမင်းတို့ အ၀တ်မပါ ဗလာကိုယ်တည်းဖြင့် ပေါ်ထွက်လာကြပါတယ်။
မင်းမင်း ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာကာ အိပ်ယာပေါ်လှဲလျောင်းလိုက်ဖို့ပြောပါတယ်။ ဘာလုပ်မှန်းမသိပေမဲ့ အသာတကြည်လဲလျောင်းတော့ ညီဇော်က လက်ကောက်ဝတ်တွေ၊ ခြေချင်းဝတ်တွေကို ခုတင်ရဲ့တိုင်တွေနှင့် ပူးချည်လိုက်ပါရဲ့။ ကိုယ်တုံးလုံး လှဲလျောင်းနေတဲ့ကျွန်တော် အရူးတစ်ယောက်ကို မလှုပ်နိုင်အောင်ထိန်းထားသလို ချည်နှောင်ထားခံရတယ်။ နောက်တော့မင်းမင်း ခပ်တုတ်တုတ် ဖယောင်းတိုင် တစ်ခုကို မီးညှိလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုကြည့်လျက် 'ခပ်နွေးနွေးတော့ ခံစားရလိမ့်မယ်၊ အရေပြားကိုတော့ မလောင်စေပါဘူးကွ၊ အိပ်ယာ ပေါ်မှာ လှဲပြီး အထိအတွေ့အာရုံကို ခံစားပျော်ရွှင်ကြည့်ပါ'
သူဘာတွေပြောနေမှန်း ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့။ ချည်နှောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေကို လွတ်လိုလွတ်ငြား လှုပ်ရှားရုန်းကန်ကြည့်တော့ ကျွန်တော်ဆွဲဆန့်ကြည့်ပါမှ ပိုပြီးကြပ်သွားတယ်။ ခဏအကြာမှာ ညီဇော်က မီးညှိထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကို ယူဆောင်ကာ အိပ်ယာဆီ လှမ်းလာပါရော။ ဖယောင်းတိုင်မှ ပျော်ဝင်နေတဲ့ ဖယောင်းရည်တွေကို ကျွန်တော့် ရင်အုပ်ပေါ် အစက်ချပါတယ်။ 'အာ...အ...အ' ညီဇော် က ဒီလိုလုပ်ရတာ သဘောကျသတဲ့ သူတို့။ အဲဒီအချိန်မှာ မင်းမင်းက ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆွဲယူကာ အဆီတွေလိမ်းပြီး ကစားတယ်၊ ချောဆီ တစ်မျိုး ထင်ပါရဲ့။
ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်သိတာပေါ့ စိတ်ဆန္ဒသာ မပါရင် တခြားသူတွေကို အလွယ်တကူ လိုက်လျောလို့ မရသူဆိုတာ။ မင်းမင်းက ကျွန်တော့်ရွှေဥနှင့် ငပဲကို အမျိုးမျိုး ပွတ်သပ်ကစားနေပေမဲ့ မာတောင်မလာဘူးလေ။ ညီဇော်က သူ့လက်တွေကို ချောဆီလိမ်းကာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံဆီလှမ်းတယ်။ သူက သူ့လက်ချောင်းတွေကို ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေအောက် ဒါရိုက်ထားကာ ပွတ်သပ်နှိပ်နယ်လေရဲ့။ ပြီးတော့ သူ့လက်ချောင်းဟာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ တိုးဝင်လာရော။ သူ့လက်ချောင်းတွေကို စတင်လှုပ်ရှားကာ ကျွန်တော့် prostate ကိုနှိပ်တယ်။ အလုပ်တော့ ဖြစ်လာပြီထင်သား ကျွန်တော့်ငပဲဟာ စတင်မာတောင်လာပြီ။ သူအဲဒါကို ပိုပြီး ဖိနှိပ်ကစားလေ ကျွန်တော့်ငပဲ ဟာ ပိုပိုပြီး မာလေ။ သူတို့နှစ်ဦး အချင်းချင်းပြုံးကြည့်ကြကာ ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို အလုပ်ဖြစ်သားဆိုတဲ့ သဘောညီကြပါတယ်။ အခုပုံစံ မှာ ညီဇော် က ကျွန်တော့်ခါးနေရာကို ခွပြီးထိုင်နေတာဆိုတော့ သူ့ရွှေဥနှင့် မာတောင်နေတဲ့ ငပဲတွေဟာ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေနှင့် ထိ ခတ်နေတာ။ မင်းမင်းကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျောက်သား ငပဲ၊ရွှေဥတွေနှင့် ကစားလိုက် ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ပေါ်ကို ဖယောင်းစက်တွေချ လိုက်လုပ်နေ သေး။ ရုတ်တရက် ညီဇော်က သူ့ရဲ့ မာတောင်ရှည်လျားပြီး ရမ်းနေတဲ့ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်မျက်နှာနားတိုးကပ်လိုက်ရင်း ပါးစပ် ခပ်ကျယ်ကျယ်လေးတဲ့။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို ရောင်ရမ်းပြီး ဟပေးလိုက်မိပြန်တော့ သူ့ငပဲကို သွင်းတော့တာ။ သူသွင်းတာက ခပ် ကြမ်းကြမ်း ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲထိရောက်တယ်။ အော့အံမလို ကျွန်တော်ချောင်းဆိုးတော့မှ သူဆွဲနှုတ်သွားတယ်လေ။
ညီဇော်က သူ့ပစ္စည်းကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကခွာတော့ မင်းမင်းဆိုတဲ့ လူထွားကထရပ်ကာ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေပေါ်ထိုင်တယ်။ သူ့ကိုယ် လုံးကသာလေးတာမဟုတ် သူ့ငပဲကလည်း ညီဇော်လောက်သာမရှည်တာ အတော့်ကိုတုတ်တာ။ ဒီလောက်တုတ်တဲ့ငပဲကိုကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ဖူးခဲ့ပါ။ မင်းမင်းက ထိုင်နေရာမှ ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီ သူ့ငပဲကိုတိုးကပ်ပြန်တော့ ပါးစပ်ကိုဟပေးလိုက်ရပြန်ရော။ အနည်းဆုံး ကျွန်တော့် အော့အံချင်စိတ် မဖြစ်အောင် အလိုက်သင့်ဟပေးတတ်ပြီထင်ပါရဲ့။ သူ့ကြွက်သားအချို့တဆတ်ဆတ်ခါရင်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို -ိုးပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ငပဲဖြစ်အင်ကို လုံးဝမေ့သွားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ညီဇော်က ကျွန်တော့်အောက်ပိုင်းမှာ သာယာနေတာဗျ။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် ကျွန်တော့်ငပဲကိုပွတ်ဆွဲလိုက်၊ ကွမ်းသီးခေါင်းကို လျှာနှင့်ကလိလိုက်၊ လည်ချောင်းထဲထိမြှုပ် အောင်ကြိုးစားလိုက်ဖြင့် အလုပ်လုပ်နေတာပေါ့လေ။ မင်းမင်းက ကျွန်တော့်ပါးစပ်တွင်း သူ့ငပဲကိုခပ်သွက်သွက်အသွင်းအထုတ်လုပ်နေ တာ အရည်ကြည်တစ်ချို့စိမ့်ထွက်လာသလိုပဲ။ သူ ခပ်သွက်သွက် ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲမှ အပြင်ကို ဆွဲထုတ်ရင်း ညီဇော်ကိုပြောလိုက် တာက 'ငါပြီးတော့မယ်ကွ' တဲ့။ ညီဇော်က ကျွန်တော့်ငပဲကို လွှတ် မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ခြေထောက်ကို ချည်နှောင်ထားတာ တွေကို ဖြေလိုက်ခြင်းအား ခံစားရမိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းဖက်ကိုသွား လက်ကောက်ဝတ်ကကြိုးတွေကိုပါ ဖြေလွှတ်လိုက် ပါရော။
မင်းမင်းက ထရပ်လိုက်ပါ အိပ်ယာပေါ်မှာ သူလဲလျောင်းချင်လို့ဆိုပဲ။ သူက လှဲချလိုက်တာ ဦးခေါင်းဟာ အိပ်ယာအောက်ခြေဆီညွှန်းဆို နေပြီး ကျွန်တော်ကတော့ ခုတင်ခေါင်းရင်းဖက်ဆီ သူ့ခြေထောက်တွေကို ကိုင်ရင်းနေလိုက်ရတယ်။ အနေအထားက sixty – nine အနေအထားဖြစ်နေစေပြီး ကျွန်တော့်တင်ပါးများကတော့ လေဟာနယ်ထဲမှာ။ သူပြောတဲ့အနေအထားအတိုင်း ကျွန်တော်နေလိုက်တာ ဆိုတော့ မင်းမင်းရဲ့ငပဲနှင့် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေဟာ လက်မအနည်းငယ်သာကွာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်နောက်ဘက်က ညီဇော်က ကျွန်တော့်တင်းပါးနှင့်ခရေ၀တလျှောက် ချောဆီတွေ ရွှဲရွှဲစိုအောင် လုပ်ဆောင်နေပါ၏။ 'အာ...အ' ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှ မခံစားရ ဖူးတဲ့ နာကျင်မှုမျိုးကို ညီဇော့်ငပဲတိုးဝင်မှုဖြင့် မြည်းစမ်းကြည့်မှ ရရှိဖူးပါရော။ ကျွန်တော့်နှုတ်က နာကျင်သံထွက်အော်ညည်းတော့ 'ဒီ-ီး ကြီးက ခင်ဗျားအတွက် သထားတာ၊ ယူလိုက်စမ်းအကုန်....ယူလိုက်..အ' ဆိုပြီး အထုတ်အသွင်းမြန်မြန်လုပ်ပါတယ်။
ညီဇော် ကျွန်တော့်ဖင်ကို အားရပါးရ -ိုးနေစဉ်မှာ မင်းမင်းက ကျွန်တော့်ငပဲကိုလျှာတွေအာတွေနှင့် ပြုစုပေးပါရဲ့။ တင်ပါးထဲက နာကျင်မှု တွေဟာဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိမျောလာကာ ညီဇော့်ငပဲခေါင်းက ကျွန်တော့် prostate ကို ထိထိပြီး ကလိတာကို အရသာခံစားမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ သံချောင်းလိုမာသထက်မာလာပါလား? ညီဇော်က သူ့ငပဲကိုလည်းပြုစုလိုက်ဦးလေ လို့ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း ပါးစပ် ကိုဖွင့်လိုက်ကာ မင်းမင်းငပဲဝင်ရောက်မှုကို ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ မင်းမင်းရဲ့ ငပဲကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွင်း အသွင်းအထုတ်ဖြစ်နေ သလို ညီဇော်က ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေထဲ သူ့ငပဲအားရပါးရအပြိုင်တည်းလိုမြှုပ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ climax ဖြစ်ဖို့နီးလာ ပါတော့တယ်။
ဖီလင်နှစ်မျိုးကို တပြိုင်တည်းလိုလို ခံစားရတာကြောင့် ရွှေဥတွေထဲကတစ်ဆင့် ထွက်လာမည့် သုတ်ရည်တွေဟာ ပေါက်ကွဲထွက်ဖို့ ငပဲ ထိပ်ကိုရောက်လုနီးပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကျောပြင်ဆီကျရောက်လာပြန်တဲ့ ပူနွေးတဲ့ဖယောင်းစက်များဟာ အထိအတွေ့ခံစားမှုမှာ အထောက် အကူပေးတာ သတိထားမိပါတယ်။ ညီဇော်ရဲ့ တဆုံးဖိပြီးသွင်းတဲ့အချိန်၊ မင်းမင်းကလည်း သူ့လည်မျိုထဲထိ ကျွန်တော့်ငပဲကိုဖိမျိုလိုက် တဲ့အချိန် တပြိုင်တည်းလိုဖြစ်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်လုံးဝမထိန်းနိုင်ဘဲ ပါးစပ်က မင်းမင်းငပဲကို အဆုံးထိမျို၊ ကျွန်တော့်ငပဲကိုလည်း သူ့ ပါးစပ်ထဲ အကုန်ဖိသွင်းမိကာ ရှိသမျှ 'မအား'တွေကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မင်းမင်းက ပန်းထည့်လိုက်တာ ငန် ကျိကျိကိုဖြစ်ရော။ ညီဇော်သည်လည်း ခန္ဓာကိုယ် တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ သူ့အရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်တာကို တင်ပါးအကွဲကြောင်း တလျှောက် ခံစားရမိပါတယ်။ သုံးယောက်သား တပြိုင်တည်းလိုလို ပြီးဆုံးကြခြင်း။ အထိအတွေ့အာရုံခံစားခဲ့ရမှုက တော်တော်ကောင်း ပါရဲ့။
အရာအားလုံး ပြီးတော့ အိပ်ယာပေါ် သုံးဦးသား လဲပြိုသွားကြတာ ညီဇော့်နှုတ်ဖျားကဖြောင့်ချက်တွေကြားရပြန်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဖျဉ်းကနဲဖြစ်မိပါသေးတယ်။'အခု ၅နှစ်လောက်စောင့်စားနေခဲ့ရတာကို ရရှိခဲ့ပြီပဲ။ ခင်ဗျား အလုပ်ရုံးခန်းထဲလမ်းလျှောက်ပြီးဝင်လာခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအချိန်ကတည်းက ပတ်သက်ချင်စိတ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားက straight ဆိုတာသိခဲ့ရတော့ အခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်မှ မရ ခဲ့ဘူးပေါ့။ နှင်းဆီနှင့် ခင်ဗျားဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံတွေကို ဖုန်းထဲကနေကြားလိုက်ရချိန်မှာတော့ ဒါအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဆိုပြီး လှုပ်ရှားခဲ့တာ'
ကျွန်တော် '၀ုန်း'ကနဲထရပ်လိုက်ကာ 'ညီဇော် - မင်းလူယုတ်မာပဲ။ ငါရဲစခန်းကိုသွားပြီး မုဒိမ်းမှုနှု့် မင်းရော မင်းမင်းကိုရော အရေးမယူခိုင်း တာပဲ ၀မ်းသာဦး။ ငါ့ကို အဆင်ပြေပြေ ပြောဆိုဆက်ဆံတာက မင်းအတွက်ကောင်းလိမ့်မယ်' လို့အော်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
အိပ်ယာပေါ်က ဆင်းကာ ရေချိုးခန်းထဲသွားပြီး ကျွန်တော့်ရင်အုပ်နှင့် နောက်ကျောဘက်က မာပြီးခဲစပြုနေတဲ့ ဖယောင်းစက်တွေကို ခွာဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ မင်းမင်းကလိုက်လာပြီး ကျွန်တော့်နောက်ကျောဖက်က ဖယောင်းတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ကူညီပေးပါရဲ့။ 'ကျော်ကျော် - ခင်ဗျားက sexy အရမ်းဖြစ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲဗျ။ ညီဇော်နဲ့အတူ ၀င်နွှဲရတဲ့ ဒီညနေခင်းလေးကို သဘောကျတယ်ဗျာ။ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်သာ ခင်ဗျားကို ပတ်သက်လို့ရမှာကိုး'
ကျွန်တော်အ၀တ်တွေကို ပြန်လည်ဝတ်ဆင်နေချိန်မှာတော့ ညီဇော်က သူ့အတွက် နောက်ထပ်စိတ်ရှုပ်စ၇ာ ကျွန်တော့်အတွက် မလို တော့ဘူး၊ သူအလုပ်ကထွက်ခွာဖို့ resign letter တင်ထားပြီးပါပြီ မကြာခင် လစာကောင်းကောင်းပေးမဲ့ တခြားအလုပ်ကို ရှာတော့မှာ မို့တဲ့။ နှင်းဆီနှင့် သူဋ္ဌေးကို သွားပြောမယ်လို့ ခြောက်လှန့်တဲ့ကိစ္စက ပြီးသွားပြီဆိုပဲ။ ကျွန်တော်ဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်ပဲ အ၀တ်တွေကို အပြီးသတ် ၀တ်ဆင် ကာ တံခါးမကြီးဆီဦးတည်သွားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ အ၀တ်မပါ ၀စ်လစ်စလစ်နှင့် သူတို့နှစ်ဦးကို လှည့်ကြည့်လိုက် ကာ 'နှစ်ယောက်လုံး သေဖို့ပဲကောင်းတယ်ဗျာ' လို့ပြောပြီး တံခါးကနေ ပြန်ထွက်လာလိုက်ပါရဲ့။
ရက်သတ္တပတ် ၃ပတ်လောက်ကြာပြီးချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိတောင့်တတာတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားတာတွေနှင့် မရိုး မရွခံစားရပါတယ် ရေချိုးခန်းဝင်ချိန် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပွတ်သပ်မိချိန်မှာတော့။ မသွားဘူးဆိုပြီး နေပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကားဟာ ညီဇော်တို့တိုက်ခန်းရှိရာကိုသွားတဲ့ လမ်းမပေါ်ရောက်နေပါပြီ။ ညီဇော်နှင့် မင်းမင်းတို့နှစ်ယောက် ဧည့်ခန်းကြမ်းပြင်က ကော်ဇောပေါ်မှာ လှဲလျောင်းပြီး ဘာကိုကြည့်နေကြသည်မသိပြတင်းကလှမ်းမြင်ရတာလေ။ ကျွန်တောင့်တင်ပါးအစုံနှင့် ငပဲဟာ တဆတ်ဆတ်လှုပ်ရှားကာ မာကျောစပြုလာပါရဲ့ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို ပြန်လည်ခံစားမိရင်း။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်းနိုင်ပါဘူး ဘာတွေကများ သူတို့ ဆီဆွဲခေါ်လာမိမှန်း။ အခန်းတံခါးဖွင့်ဝင်သွားချိန်မှာ သူတို့တွေက မြင်လိုက်ရတဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ် အလန့်တကြားမျက်ဝန်းတွေနှင့် စိုက် ကြည့်ပါတယ်။ အတန်ကြာမှ သူတို့နှစ်ဦး အိပ်ခန်းဆီခြေလှမ်းစတော့ ကျွန်တော်လည်းနောက်က ထပ်ကြပ်မကွာ။ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ကုတ်အင်္ကျီ၊ ၀တ်ထားတဲ့ရှပ်အင်္ကျီကို ကြယ်သီးဖြုတ် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုချ။
ဒီတော့ အိပ်ခန်းသွားရာလမ်းတလျှောက် ၀တ်ဆင် လာတဲ့အရာဟူသမျှ အိပ်ခန်းဆီညွှန်းဆိုနေကြတာ မြင်နိုင်ပါ၏ပေါ့နော်..။
Alex Aung (6 May 2011)